पूँजीवाद, सामाजिक पूँजीवाद र समाजवाद - Khabar Time
पूँजीवाद, सामाजिक पूँजीवाद र समाजवाद
in राजनीति, विचार/ब्लग, समाज
लेखक: मुकुन्द न्यौपाने ( प्रतिनिधि सभा सदस्य -समानुपातिक/नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य )
समाजवाद एउटा उन्नत स्तरको समाज व्यवस्था हो, जहाँ मान्छे माथिको शोषण पूर्णरुपले अन्त्य हुन्छ । सम्पूर्ण उत्पादनका साधन जनताको सम्पत्ति बन्दछन् र उत्पादनका वस्तुहरुमाथि पनि जनताकै स्वामित्व रहन्छ । मानिस पूर्णरुपले समाजमाथि निर्भर रहन्छ, राज्यमाथि होइन। यस्तो समाजमा मात्र श्रमजीवी वर्ग सम्मानित हुन्छ, श्रमिक जनताको जीवन समृद्ध हुन्छ । त्यो कसरी हुन्छ त ? आउनुहोस् संक्षेपमा चर्चा गरौँ ।
वर्तमान नेपाली समाज
हाम्रो वर्तमान समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक समाज हो । हाम्रो देशमा सामन्ती समाजका विशेषताहरु अझै पनि विद्यमान छन् । उत्पादनमा प्रकृतिमाथिको निर्भरताको तिन हजार वर्ष पुरानो हलो र गोरुद्धारा खेती गर्ने आर्थिक प्रणाली विद्यमान छ । आकाशको पानी आज पनि मुख्य श्रोत बनेको छ । र थोरै भागमा मात्र बाँध द्धारा निर्मित सिंचाई पानीको व्यवस्था छ । किसानमाथि चर्को व्याजद्धारा गरिने शोषण विद्यमान छ । जमिन अधिया ठेक्का लगाउने र बेगार खटाउने प्रथा पनि बदलिएको रुपमा विद्यमान छ । किसानहरुमाथि जमिन्दार वर्गका हैकम, सामन्ती समाजका बाँधाप्रथा, छुवाछुत, धर्मको नाउँमा गरिने भेदभाव, कर्मकाण्डको नाउँमा गरिने ब्राह्मणवादी शोषणका रुपहरु, आम जनतामाथि साँस्कृतिक शोषण पनि विद्यमान छन् । यिनै कारणले हामी हाम्रो समाजलाई अर्धसामन्ती भन्दछौं ।
सामन्ती र अर्धसामन्ती समाजका भिन्नता
हाम्रो समाजमा पूँजीवादले पनि प्रवेश गरिसकेको छ । प्रवेश मात्र होइन, कैयौं क्षेत्रमा यसले आफ्ना जराहरु बलियो पनि बनाईसकेको छ । पूर्ण सामन्ती समाजको उत्पादनको विशेषता हो उपभोगको लागी उत्पादन । माल उत्पादन, त्यो समाजको मूल विशेषता बन्दैन । पूँजीवादी समाजको मुनाफाका लागी उत्पादनको प्रक्रिया हाम्रो समाजको पनि विशेषता बनेको छ र आजको हाम्रो उत्पादनले माल उत्पादनको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ ।
दोश्रो कुरा, खेतीमा ट्याक्टरको प्रयोग, फलामे हलोहरु, धान गहुँ झार्ने थ्रेसरहरुको प्रयोग समेत शुरु भइसकेको छ । ठूल्ठूला बाँधहरु निर्माण जस्तैः कन्काई, बागमती, बबई, कमला, कोशी आदि र अन्य सेक्टर सिँचाइहरु पनि प्रयोगमा आइरहेका छन् ।
तेश्रो कुरा गाउँमा जमिन्दारहरुको शासन अत्यन्तै फितलो भएको छ र किसानहरुलाई सिपाही लगाउने, घरमा ल्याएर गोर्खे लौरी लगाउने, जरिवाना गर्ने, जबरजस्ती जमीनबाट विस्थापित गर्ने, घर उठाएर गाउँ निकाला गर्ने ( जुन सामन्ती शासनका विशेषता हुन् ) कुरा अत्यन्तै कमजोर भएका छन् र नगण्य मात्रामा विद्यमान छन् ।
चौथो कुरा उपभोगको लागी उत्पादन प्रणाली अत्यन्त कमजोर भएको छ र दुर्गम देहाती क्षेत्रमा गरिने कृषि बालीहरुले पनि दिनहुँ नगदे बालीको स्वरुप ग्रहण गर्दै गइरहेका छन् । गाउँगाउँमा धान खरिदबिक्रीका डिपोहरु खुलेका छन्, बाटोहरु पुगेका छन् र ट्रकहरुमार्फत धान ओसारपसार गरिन्छ । जहाँ ट्रक पुग्दैनन्, त्यहाँ लदनिया घोडाहरु र खच्चरहरुद्धारा खरिदबिक्रीका प्रक्रियाहरु चलिरहेका छन् । यसले पूँजीवादी बजार अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाईरहेको छ ।
पाँचौं कुरा, संस्कृतिको क्षेत्रमा सामन्ती परोपकार र अतिथि सत्कार, दान दक्षिणा र भेटीजस्ता कुराहरु कमजोर हुँदै गएका छन् र हरेक कुरा पैसासँग साटिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । दान गर्दा धर्म हुने र पाहुना पाल्दा पुण्य हुने कुरा फितलो बन्दै गएका छन् ।
यी सबै कुराले के देखाउँछन् भने हाम्रो समाज न त पूर्णतः पूँजीवादी छ, न पूर्णतः सामन्तीवादी । यहाँ सामन्तवाद पनि जिउँदो छ र पूँजीवाद पनि विद्यमान छ । त्यसैकारण हामीले हाम्रो देशलाई अर्धसामन्ती भनेका छौं । यसको अर्थ हो अर्धपूँजीवादी । यसलाई अझ अर्धसामन्ती भन्नु भन्दा अर्धपूँजीवादी वा पूँजीवाद उन्मुख पिछडिएको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्नु तथ्यसँगत हुनेछ । किनकी पूँजीवादका कडीहरु दिनहुँ बढ्दै छन् र सामन्तवाद दिनहुँ कमजोर बनिरहेको छ ।
यसलाई हामीले हालसम्म अर्धऔपनिवेशिक भन्दै आएका छौं । वास्तवमा यसोभन्दा यसको सिधा अर्थ आधा स्वतन्त्र र आधा औपनिवेशिक भन्ने लाग्छ । वास्तवमा यसले एउटा श्रम सिर्जना गर्दछ । चीनलाई क्रान्तिकालमा त्यहाँको पार्टीले अर्धऔपनिवेशिक भनेर विश्लेषण गर्यो । त्यसबेला त्यहाँको ठूलो भूभाग जापानको कब्जामा थियो र कोमिन्ताङ पार्टी भित्रको एउटा हिस्सा जापानको उपनिवेशलाई स्वीकार्ने पक्षमा थियो । जापान सिधै सेना लिएर पसेको थियो ।
साम्राज्यवादको कुनै पनि मुलुकलाई उपनिवेश बनाउने पुरानो तरिका प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप थियो । आफ्नै सैनिकद्धारा सत्ताकब्जा गरेर त्यो मुलुकको पूर्ण शासन चलाउनु र त्यो शासनमार्फत औपनिवेशिक मुलुकको धनसम्पदाको दोहन गर्नु ।
तर आज साम्राज्यवादले आफ्नो तरिका बदलेको छ । खास गरि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी जनताको व्यापक जागरण र प्रतिरोध आन्दोलन तथा दुईवटा विश्वयुद्धमा भोग्नुपरेको तीतो पराजयले साम्राज्यवाद, अन्य मुलुकमा गर्ने हस्तक्षेपको आफ्नो तरिकामा परिवर्तन गर्न बाध्य भएको छ ।
यस्तो तरिकालाई नयाँ औपनीवेशिक तरिका अर्थात नवऔपनिवेशिक भनिन्छ । नवऔपनिवेशिक तरिकामा साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैन । उसले औपनिवेशिका मुलुकहरुको पूँजीलाई आफ्नो मुलुकमा तान्नको लागी ती देशका सरकारहरुलाई आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन दबाब दिन्छ, राज्यका माथिल्ला अंगहरुमा कुनै न कुनै रुपमा आफ्ना एजेन्टहरुलाई सल्लाहकारको रुपमा खटाएर निती निर्माणमा आफ्नो प्रभाव जमाउँछ ।
यस्ता देशका कुनै पनि सरकारले उसको आदेशमा आलटाल गर्यो भने उसले ती मुलुकमा उसमार्फत लागु गरिएका परियोजनाहरु बन्द गर्ने, आर्थिक सहायताहरु रोकी दबाब दिने कामहरु गर्छ । यसरी विधि र विधान बनाउने ठाउँलाई प्रभावित गरेर राज्यका सम्पदालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने तरिका नै आजको साम्राज्यवादको शोषणको नयाँ तरिका हो ।
नवऔपनीवेशिक मुलुकमा क्रान्तिको चरित्र
यस्ता मुलुकमा क्रान्तिको चरित्र सारमा पूँजीवादी नै हुन्छ । तर त्यो पुरानो पूँजीवादी क्रान्ति नभएर नयाँ पूँजीवादी क्रान्ति हुन्छ । त्यो क्रान्तिले सामन्तवादलाई विस्थापित गर्छ र पूँजीवादको विकासको लागी ढोका खोलिदिन्छ । यस क्रान्तिलाई कसैले नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद, लोक जनवादको नामाकरण गरेका छन् । सारमा यो सामाजिक पूँजीवादी जनवाद हो ।
पुरानो पूँजीवाद र सामाजिक पूँजीवादको भिन्नता
पुरानो पूँजीवादमा पूर्ण रुपले पूँजीपति वर्गको स्वामित्व हुन्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रको सम्पत्ति निजीकरण हुन्छ । राज्यको नेतृत्वमा पनि पूँजीपती वर्गकै पार्टीहरु हावी हुन्छन् र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पूँजीपती वर्गको इच्छा अनुसार संचालन गरिन्छ । सामाजिक पूँजीवादमा सार्वजनिक संस्थाहरु राज्यको स्वामित्वमा हुन्छन् । निजी स्वामित्वले जनताको जीवन कठिनाइ तर्फ नधकेलोस् भन्ने तर्फ राज्य चनाखो हुन्छ र विस्तारै समाजमा सार्वजनिक जीवनको सुरुवात हुन्छ । आर्थिक रुपमा मात्र होइन, साँस्कृतिक रुपमा पनि नयाँ जीवनको सुरुवातको महशुस समाजले गर्न थाल्छ । सारमा भन्दा समाज निजी पूँजीवादबाट सामाजिक पूँजीवादतर्फ अगाडि बढ्छ । अर्थतन्त्रको पूर्ण विकासका साथै मानिसको चेतना र उन्नत स्तरको संस्कृतिको विकास बिना समाजवादी समाजको स्थापना सम्भव हुँदैन । उन्नत स्तरको अर्थतन्त्रका लागी पूँजीको विकास अनिवार्य छ । यसैकारण हाम्रो क्रान्तिको आजको उद्देश्य भनेको निजी पूँजीवादलाई पनि बढावा दिँदै कृषि क्षेत्रमा रहेको सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्नु र बहुदलीय जनवादी व्यवस्था लागू गर्नु हो । जसले सामाजिक पूँजीवादलाई स्थापित गर्छ र समाजवादको आधार तयार गर्छ ।
वर्तमान क्रान्तिको चरण
हो, हामी पूँजीवादी क्रान्तिकै चरणमा छौं । रुसको फरवरी क्रान्ति पनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै थियो । चीनको १९४९ को क्रान्ति पनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै थियो । पुरानो पूँजीवादबाट यो के कुरामा भिन्न थियो भने त्यहाँ राज्यका कानुन, विधि र विधान आम श्रमजीवि वर्गको हिततर्फ उन्मुख थिए । त्यो समाजवाद तर्फ उन्मुख थियो । साथै त्यहाँ पूँजीपति वर्गको नेतृत्वको स्थानमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व थियो ।
पूँजीवाद र समाजवादको आधारभूत भिन्नता
यस सवालमा स्पष्ट हुनको लागी हामीले समाजवाद र पूँजीवादका विशेषताहरुको बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । पूँजीवादका विशेषताहरु मूलतः निम्न प्रकारका छन्ः
क. उत्पादनका साधनमाथि पूँजीपति वर्गको स्वामित्व
ख. मालको उत्पादन
ग. बजार अर्थव्यवस्था
घ. अतिरिक्त श्रमको आधारमा अतिरिक्त मूल्यद्धारा पूँजीको संचय
ङ. मानवीय श्रोत र पूँजीमा व्यक्तिको स्वामित्व
यसरी स्वामित्वमा आधारित पूँजीवादी समाजमा सम्पूर्ण कुरा पूँजीपती वर्गको अधीनमा हुन्छन् र उसकै इच्छाअनुसार परिचालित हुन्छन् । अतिरिक्त श्रमद्धारा जम्मा गरिएको सम्पूर्ण मुनाफा पूँजीपती वर्गको खल्तीमा जान्छ । बजार पूर्णतः पूँजीपती वर्गको कब्जामा हुन्छ । मूलरुपमा काम नगर्नेहरुको काम गर्नेहरुमाथि हैकम हुन्छ ।
श्रमजीवी वर्गको बाध्यात्मक श्रमशक्तिको निजी व्यक्तिलाई विक्रि र वर्गीय व्यवस्था अथवा चर्को वर्ग अन्तरविरोधमा विभाजित समाज, यिनै हुन् पूँजीवादका विशेषताहरु ।
अब हामी समाजवादका विशेषता तर्फ जाऔँ । समाजवादी समाज र पूँजीवादी समाजको मुख्य अन्तर के हो भने समाजवादी समाजमा उत्पादन र बितरणका सम्पूर्ण साधनहरु सम्पूर्ण जनताको सम्पत्ति हुन्छन् । उत्पादनका साधनहरु व्यक्तिका निजी हुँदैनन् र सम्पत्तिहरु मानिसको शोषणका निम्ति प्रयोग हुँदैनन् ।
समाजवादी समाजमा रोगी बिरामी, बालक र बृद्धबाहेक हरेकले काम गर्नुपर्छ । कामका प्रकृतिहरु भिन्नभिन्न हुनसक्छन् । चाहे मानसिक काम होस् या शारिरिक श्रम, श्रमको मूल्य बराबर हुन्छ र सम्मान पनि त्यत्तिकै हुन्छ । श्रम प्रतिको सम्मानले श्रमिकहरुको प्रतिष्ठा अत्यन्त माथि उठ्नेछ र सम्पूर्ण समाज श्रमजीवीहरुको समाजमा रुपान्तरित हुनेछ ।
समाजवादमा उत्पादनको व्यवस्था आम जनताको आवश्यकता पूरा गर्नको लागी गरिन्छ । कुनै वर्ग विशेषको नाफा बढाउनको लागि गरिदैन । नाफाको निम्ति जब होडबाजी समाप्त हुन्छ, त्यसपछि मात्र योजनाबद्ध उत्पादनतर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ र जनताका आवश्यकताको लागी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
पूँजीवादी व्यवस्था एउटा विश्वव्यापी व्यवस्था भएजस्तै समाजवादी व्यवस्था पनि एउटा विश्व व्यवस्था हो । समाजवादी विश्व व्यवस्थामा एउटा राष्ट्रद्धारा अर्को राष्ट्रमाथि गरिने शोषण, उत्पीडन, थिचामिचो र आक्रमणको पनि अन्त्य हुन्छ । यो साँचो अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय समाज हुन्छ । तर समाजवादमा पनि राज्य र राष्ट्र भन्ने कुराहरु रहन्छन् । राष्ट्र सबैको साझा फुलबारी रहन्छ र राज्यले आम जनताको अभिमत जाहेर गर्छ ।
अर्को मूलभूत कुरा समाजवादमा धनी र गरिब बिचको भेद समाप्त हुन्छ, जुन कुरा पूँजीवादी समाजको मूल विशेषता हो । शारिरिक श्रम गर्ने र मानसिक श्रम गर्नेहरु बिचको भिन्नता, गाउँ र शहरबीचका भिन्नताहरुको ठूलो खाडल पनि मेटिएर जान्छ । जातजाति, भाषाभाषी, महिलापुरुष बिचको चर्को विभेदहरू पनि समाप्त भएर जान्छ ।
समाजवादी समाज एउटा पूर्ण, स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाज हो, जहाँ पूर्णरुपमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । त्यसैले समाजवादी राज्यसत्ता पूर्णरुपले प्रजातान्त्रिक राज्यसत्ता हुन्छ । बहुमत जनताका अभिमतहरु के छन् र शासकहरुप्रतिको जनताको भावना कस्तो छ भन्ने बुझ्नको लागी आवधिक आम निर्वाचन गर्ने र जनमत लिने काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । जनताद्धारा जनताको शासन भन्ने प्रत्याभूति नै समाजवादको शासन व्यवस्थाको विशेषता बन्नुपर्छ ।
समाजवादमा उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्वको प्रश्न
जबसम्म स्वामित्व जनताको हातमा आउँदैन, तबसम्म त्यहाँ समाजवाद आउँदैन । सरकारको हातमा सम्पूर्ण उत्पादनका साधनको रेखदेख र खटनपटनको अधिकार रहेसम्म त्यसलाई जनताको स्वामित्व वा जनताको समाजवाद भन्न सकिँदैन । त्यो राज्यको स्वामित्व हो, शासकहरुको समाज हो । राज्यको स्वामित्वलाई सम्पूर्ण जनताको स्वामित्व भनेर सरकारमा जाने मुठ्ठीभर मानिसहरुले सधैं नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिएर त्यसैलाई टिकाउने दिशातिर अगाडि बढे भने त्यसले नोकशाही पूँजीवाद तिर विकास गर्छ । त्यहाँ समाजवादका जराहरु कमजोर हुन्छन् । पूँजीवाद र नोकरशाही पूँजीवादमा फरक के हुन्छ भने नोकरशाही पूँजीवादले राज्यको नाममा राज्यलाई प्रयोग गरेर शोषण गर्छ । एकाधिकार पूँजीवादले आफ्नो बलबुतालाई मुख्य आधार बनाउँछ । एकाधिकार पूँजीवादले कानुन बनाएर त्यस मार्फत आफ्नो शोषण गर्छ र सबै पूँजी सेतो ( खुल्ला धन ) हुन्छ । नोकरशाही पूँजीवादले राज्यको नाममा, समाजका नाममा लुकिछिपी गर्छ र कालो पूँजी जम्मा गर्छ । विगतमा कतिपय समाजवादका शासकहरुले यस्तो पनि गरे । त्यसै कारण जनता उनीहरुबाट विमुख भए ।
यसलाई रोक्ने उपायः यसको मुख्य उपाय भनेको जनताको सचेतनता, आम श्रमजीवी जनताको संगठित क्षमता, आवधिक निर्वाचनद्धारा सरकारका काम कारवाहीको मूल्याँकन, सामाजिक स्तरको निरन्तर जाँच-पड्ताल र राज्यमाथि जनताको निगरानी नागरिक अधिनस्थ समाजवाद आदि हुनसक्छन् ।
समृद्ध जीवनको लागि समाजवादको अवधारणा
हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौं कि पूँजीवादी समाजको आर्थिक आधार, उत्पादनका साधनहरु माथि व्यक्तिको अधिकार हुन्छ । व्यक्तिले धान्न नसक्ने ठूलाठूला औद्योगीक प्रतिष्ठानहरु पनि व्यक्तिकै हातमा हुन्छन् । त्यहाँ सार्वजनिक संस्थानको कुनै विशेष भूमिका हुँदैन ।
सामाजिक पूँजीवादमा यसको ठाउँ सरकारले लिन्छ । उत्पादनका साधनहरु, कलकारखाना, जग्गा जमिन सम्पूर्णको रेखदेख प्रायः सरकारले गर्छ । राज्यका कैयौं क्षेत्रमा निजी पूँजीवादी कारोबार पनि यथावत् हुन्छ । कतिपय स्थानमा सरकारले विदेशी या स्वदेशी निजी पूँजीपती सँग मिलेर पनि पूँजीको परिचालन गरिरहेको हुन्छ । यो अवस्थामा श्रमको शोषण पनि हुन्छ र मानवद्धारा मानवको शोषणको पनि अन्त्य हुदैन । तर यसको माथिल्लो ढाँचा समाजवादी स्वरुपको हुन्छ र यसले समाजवादतर्फ समाजलाई अगाडी बढाईरहेको हुन्छ । यहाँ सम्पूर्ण समाजको समृद्ध जीवनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
समाजवादी समाजमा उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमा पूर्णरुपले समाजको अधिकार हुन्छ । साधनहरु, कलकारखाना, जग्गा जमिन जनताका सम्पत्ति बन्दछन् । यहाँ राज्य र सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन । नागरिकहरु सचेत, सक्षम र स्वअनुशासनमा संगठित हुन्छन् । उनीहरुले आफूले स्वतन्त्र ढंगले बनाएका आफ्ना संस्थाहरु मार्फत आफ्नो व्यवस्था मिलाउँछन् । सरकारको काम एउटा संयोजकको रुपमा मात्र हुन्छ ।
मानिस माथि मानिसले गर्ने शोषणको पूर्णरुपले अन्त्य हुन्छ । वर्गभेदहरु मेटिन्छन् । वादविवाद र परिसम्वादहरु अझ उच्चस्तरबाट जारी रहन्छन् । वैज्ञानिक प्रयोगका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ चरित्रहरु फेला पर्छन् र मानिसको अनुसन्धान कार्य अरु सक्रिय ढंगले अघि बढ्छ । प्रेम र सद्भाव, सम्मान सत्कार मानिसका मुख्य विशेषता बन्छन् । प्रकृति र मानिस बिचको संघर्ष तथा सत्य र असत्य बिचको संघर्ष निरन्तर जारी रहन्छ । वैज्ञानिक प्रयोगका क्षेत्रमा नयाँनयाँ चरित्रहरु फेला पर्छन् र मानिसको अनुसन्धान कार्य अरु सक्रिय ढंगले अघि बढ्छ । समाज आज कहिल्यै नसोचेको ढाँचामा अगाडी बढ्छ । हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध जीवनको लागी समाजवादको अर्थ यही नै हो ।
हाम्रो धारणा के छ भने सम्पूर्ण कुरा जीवनको लागी हुनुपर्छ र समाजको आवश्यकताको लागी हुनुपर्छ । मानवको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर गरिएका ती सबै कुरा जति सुकै असल आशयले गरिएका भए पनि कालान्तरमा तिनीहरुको परिणाम राम्रो ननिस्कने कुरा इतिहासका धेरै उदाहरणहरुले देखाइसकेका छन् । त्यसै कारण लेनिनले भनेजस्तै मानिसको आवश्यकता र आजसम्मको मानव ज्ञानको अनुभवसँग गाँसेर वस्तुको यथार्थतालाई ग्रहण गर्नुपर्छ । जीवन सिद्धान्तको लागी होइन, सिद्धान्त जीवनको लागी हुनुपर्छ –जननेता मदन भण्डारीले जोड दिनुभएको सिद्धान्त, सिद्धान्तका लागी होइन, जीवनका लागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यही हो । यो नै समृद्ध जीवनको लागी समाजवादमा पुग्ने एक मात्र बाटो हो ।
पाल्पामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटनामा ५ जना जन्तीकाे ज्यान गएपछि...
पथरी प्रकरणः छोराले गरे पर्दाफास, जेठाजुले खोले यस्तो रहस्य (भिडियोसहित)